Yakanakisa Linux Kugovera kweVanogadzira neVagadziri Linux Vakapindwa muropa
Paunenge uine basa rekuvandudza kunyorera zvinodikanwa kuve neyakagadzikana system uye chii chekukupa nenzira yakapusa maturusi ese iwayo anodikanwa mukuvandudza mukati mawo.
Linux yave zvirokwazvo mune imwe yesarudzo huru yevagadziri uye vagadziri, sezvo iine maturusi akati wandei anogona kuiswa mune chero kupi kugoverwa kweizvi uye nekuwedzera kune yakavhurwa sosi.
Muchikamu chino ngatitarisei dzimwe dzakanakisa sarudzo kukwanisa kuisa pamakomputa edu uye kuvashandura kuti ive yakanakisa programite suite.
4 Ubuntu uye Linux Mint
Iko kushandiswa kugovera kunoenderana neRolling kuburitsa modhi Iyo ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kusarudza kubva, sezvo vachikupa kugadzikana kukuru pasina kukanganisa data rako kana mapurojekiti.
Zvakare, kana iri sisitimu yaunoronga kushandisa munguva refu, inoita Arch Linux sarudzo yakanakisa, nekuti neichi kugovera iwe unogona kukanganwa nezve zvisina basa mapakeji uye kunyorera, kugadzirisa, uye nezvimwe.
Zvakanaka iwe unovaka ino system kune zvaunoda. Izvi hazvisi kusiya kunze kwese kupihwa kwakavakirwa pairi.
Iwe unogona kuwana akawanda ma IDE, kodhi edhita uye zvimwe zvinoshandiswa mukati mezvakachengetedzwa zvavo pamusoro pekuve nerubatsiro rweAUR uye nharaunda huru inotsigira kugovera.
OpenSUSE Icho chimwe cheakakura maRoll ekuburitswa ekuparadzira aunogona kusarudza kuisa pane komputa yako, kunyange openSUSE iine imwe vhezheni, Muchikamu chino tichazotarisa pane yakavhurikaSUSE Tumbleweed vhezheni.
Mumakore achangopfuura, kuvhuraSUSE yakaratidza kuve inokwanisa kwazvo uye yakagadzikana mumakore apfuura, pamusoro peiyo nharaunda yayo yevashandisi inokura nekufamba kwenguva.
Iyo ine hombe hombe dhatabhesi uye inoshamisa nharaunda yakagadzirira kubatsira. uye gadzirisa zvikanganiso zvinogona kubuda.
Iwo akakosha mapakeji uye avo ese ekuwedzera maraibhurari zvakagara zvakavakwa zvakanaka uye zvinopa kushanda pasina matambudziko mukati mekugovera, kuvhuraSUSE inokurumidza, yakagadzikana uye yakavimbika.
Kugoverwa kweLinux, Kunyangwe iyo isinga gadzire rolling kuburitsa modhi, yave chirevo chikuru cheLinux. Zvakanaka, ine timu yakakura yekusimudzira iyo inogara ichishanda kuisa tekinoroji dzazvino muhurongwa.
Pamusoro pazvo Iyo ine hombe suite yekushandisa iyo yatinogona kuwana pasina matambudziko, pamusoro peizvozvo iwe unogona kuwana mune aya mazhinji enzvimbo dzekuvandudza mabasa anowirirana zvizere nekuparadzirwa.
Izvi pasina kuregeredza rutsigiro rukuru rwaunogona kuwana pamambure kwechikamu chikuru uye kana zvisiri kutaura ese maADE uye edhiyo kodhi edhita iwe aunowana eLinux
Ubuntu uye Linux Mint
Kunyangwe Ubuntu ihurongwa hunogara huchivandudzwa (mwedzi yese mitanhatu) Tinogona kutora ayo maLTS vhezheni sehwaro hweichi chinyorwa (kutsigira-kwenguva refu) kwatinogona kusanganisira Linux Mint mukati meizvi.
Ubuntu uye Linux Mint yave imwe yeanonyanya kufarirwa masisitimu munharaunda yevashandisi veLinux uye izvi hatigoni kuzviramba.
Uyewo, Mazhinji enharaunda dzedziviriro pamwe nekodhi edhitaina mapakeji akavakirwa kunyanya izvi zvekugovera.
Aya mapakeji e "deb" uyezve mazhinji eaya anoiswa kune iyo Arch Linux AUR zvinyorwa, iyo yatinoona nayo huru referensi inotakurwa nesystem yekupa maturusi uye nharaunda huru yekusimudzira kune programmers nevagadziri.
Mukuita, ichi ndicho chinhu chakanyanya kukosha muhurongwa hwekushandisa hwauchazoshandisa kuita basa rako.
Chekupedzisira, isu hatigone kurerutsa nharaunda hombe yevashandisi yainayo uye nerutsigiro rukuru iwe rwaunogona kuwana kune ino sisitimu pane network uye, pamusoro pezvose, rutsigiro rwakananga rwatinogona kuwana kubva kumaIDEs uye makodhi edhita evanogadzira.
Pasina kupokana, chero eaya sarudzo yakasarudzika yebasa rako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Yakanakisa Linux Kugovera kwevaDhijitari neVagadziri